Raisul wasaaraha la magacaabay Cumar C/rashiid oo beri hortagaya Barlamanka federaalka Somalia
Xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiyada Joogtada ee Barlamaanka Soomaaliya.
Kulankan ayaa waxaa shir gudoominaayay guddoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana kulanka looga hadlayay arrimo ay tahay mudeynta maalinta la horgeynaayo Ra’isul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali.
Sidoo kale waxaa kuanka looga hadlay dardargelinta howlaha Barlamaanka horyaala oo ay ugu horeyso dedejinta Hindise-sharciyeedyada muhiimka u ah hay’adaha dowliga ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa lagu go’aaminyay in 24 December oo ah maalinta beri ah Barlamaanka la horkeeno Ra’isul wasaaraha cusub ee dhowaan uu soo magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya si Barlamaanka loogu weydiiyo codka kalsoonida ah.
Xoghayaha Barlamaanka Soomaaliya C/kariim Xaaji Cabdi (Buux) oo saxaafadda la hadlay ayaa xaqiijiyay in maalinta beri ah golaha Shacabka la horgeyn doono Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke si xubnaha golaha Barlamaanka ay cod ugu qaadaan.